၂၂:၂၈၊ ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၂၄ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၁ လ
၁၁:၂၇၊ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၂၂:၂၈၊ ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
== ပထဝီနယ်မြေ ==
မြို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု များဖြစ်သည့် [[ရခိုင်လူမျိုး|ရခိုင်]]၊ [[ကမန်လူမျိုး|ကမန်]]၊ [[ခမီလူမျိုး|ခမီ]]၊ [[ဒိုင်းနက်လူမျိုး|ဒိုင်းနက်]]၊ [[မရမာကြီးလူမျိုး|မရမာကြီး]]၊ မြို(မရူ)၊ သက် ဟုဆိုခါ လူမျိုးစု ၇ စုတွင်ပါ ရှိသည်။ ယခုအခါတွင် [[မောင်တောခရိုင်]] ၊ [[မေယုတောင်တန်း]] ၊ [[ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်]] ၊ စိုင်းဒင်([[စိုင်းတင် ရေတံခွန်|စိုင်းဒင်ရေတံခွန်]])ချောင်းဖျား အထက်ပိုင်းတွင်အများဆုံးနေထိုင်ကြသည် ။အထက်ပိုင်းတွင်အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။[[ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်]] ၊စမ်းပတီးချောင်းတစ်လျှောက်၊ [[ကျောက်တော်မြို့နယ်]] နှင့် [[ချင်းပြည်နယ်]] ချင်းလက်ဝတွင် အနည်းငယ် ပျံ့ နှံ့နေထိုင်ကြသည်။ နေထိုင်ရာဒေသ ပျံ့နှံ့ သွားပုံ ကို သမိုင်း ၊ နုတ်ရာဇဝင်မှတ်တမ်းများအရ ဤသို့ ဆိုပါသည် လွန်ခဲ့ သောနှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ခန့်က[[မဇ္ဈိမဒေသ]]တစ်နေရာတွင် ကုသဝတီပြည်ရှိလေသည်။ထိုပြည်တွင်ဝါရဓမ္မတူအမည်ရှိ ဘုရင်အုပ်ချုပ်စိုးစံလေ၏။ အခြားမင်းသားတစ်ပါးသည် ဝါရဓမ္မတူမင်းအား စစ်သည်ဗိုလ်ပါများစွာဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေရာ အရေးနိမ့်ပြီး မင်းညီမင်းသားဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ ကစဥ့်ကရဲပြိုကွဲ၍ အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ရန်ခြေဦးတည်ရာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရသည်။ ကုသဝတီပြည့်ရှင် ဘုရင်ဝါရဓမ္မတူ၏ သားတော် ခွာဇုပုတိမင်းသားသည် အပေါင်းအဖော်နောက်လိုက် တစ်သောင်းခန့်နှင့် အာသမ်နယ်ဘက် တွင် အချိန်အတော်ကြာရပ်နား၍ မိမိတို့၏ ဘဝတစ်သက်သာအတွက် အခြေစိုက်နေထိုင်ရန် စီစဉ်ကြသည်ဟု ဆို၏။သို့ရာတွင် အာသမ်ဘုရင်သည် ခွာဇုပုတိမင်းသားခြောက်လ၊ တစ်နှစ်စသည်ဖြင့်လောက်သာ ခေတ္တ ခိုလှုံရန် ခွင့်ပြုသည်။ အမြဲ တမ်းအခြေစိုက်နေထိုင်ရန် ခွင့်မပြုပေ။ ထို့ကြောင့်ခွာဇုပတိတို့အုပ်စုသည် အာသမ်နယ်ဘက်မှ ကစ္ဆပနဒီ မြစ်ဘက်သို့ တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းရွှေ့လာကြသည်။ထိုတစ်သောင်းခန့်သော လူအုပ်စုသည် အရှည်ကြာမြင့်စွာစခန်းချနေထိုင်မည့်နေရာတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်းနေထိုင်ကြကာ အကာအရံ ခုနှစ်ထပ်ဖြင့် ပြုလုပ်နေထိုင်ကြသည်။ ထိုခုနှစ်ထပ်သော ခြံဝိုင်း၊ ခြံစည်းရိုးများမှာ ဝါးလုံးကြီးများဖြင့် ထူထပ်စွာ ဆောက်လုပ်ထားသောခံတပ်ကြီးသဖွယ်ခိုင်လုံသည့် အကာအရံတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု [[သမိုင်း]]ကဆိုပါသည်။ ခြံစည်းရိုးထိုးကြပုံမှာ အမြင့်(၈)တောင် ရှိပြီး အပေါ်ထက်မှာ အချွန်၊ ဝါးခြမ်းပြား အစိတ်ကို အဖျား၊အရင်း အချွန်ထားကာ ၊အချွန်သည်အပြင်ဘက် ဟ ပြီး ခြံစည်းရိုးဝိုင်းကြီးကို ကာရံထိုးပါသည်။ ထိုခေတ်ကာလသည် တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရကား ဘုရင်စနစ် သူရဲကောင်းစနစ် ကျင်းသုံးကာ တစ်ပါးနှင့် တစ်ပါး တိုင်းပြည်နေရာလုနေကြသည် ဟုမှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး စစ်တိုက်သည်ကို မြိုဘာသာစကားဖြင့်(ဟိယာရို့)ဟုခေါ်ပါသည် ။မြိုလူမျိုးကိုဟုခေါ်ပါသည်။မြိုလူမျိုးကို စစ်လာတိုက်သည့် စစ်အမည်မှာ (Hὓm Pok Hie-ဟုန်မ် ပေါက်ဟိယာ ၊ Maih Bown Hie-မာမ် ဘင်န်ဟိယာ) ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။မြိုလူမျိုးတို့၏ စစ်အမည်သည် (Hoi Kong Hie-ဟွေခေါင်ဟိယာ)ဟုခေါ်သည်။ (Hὓm Pok Hie –ဟုန်မ်ပေါက်ဟိယာ) စစ်ရန်ကြောင့် မြို လူမျိုးသူရဲကောင်း ဖြစ်သည့် (ထင်းလောင်း-ဟိယာရန့်) သည်အသတ်ခံခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ရှိသမျှသော လူတို့မှာ ထိုခြံစည်းရိုးဝိုင်းတွင်သာ နေကြရ၍ ဝင်ပေါက်တစ်ပေါက် နှင့် ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်သာရှိလေသည် ။ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်သာရှိလေသည်။ ဤခြံစည်းရိုးဝိုင်းကြီးထဲတွင် နေကြသောသူများအနက် မိမိသဘောအလျောက်ဘုရင်မှတစ်ပါး မည်သူမျှ ထွက်၍ သီးခြားရပ်ရွာအိုးအိမ်တည်ဆောက်၍ မနေကြရဘဲ၊ ခြံဝိုင်းကြီးထဲမှာပင် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ နေကြရပေသည်။ ထိုသို့ ခြံဝိုင်းကြီးထဲတွင် နေထိုင်ကြရသော သူများကို ယင်းတို့ဘာသာစကားဖြင့် ''မရုပ်နေဘရီးကအဲဒတ်''ဟုခေါ်ကြသည်။ သို့သော် ဤတစ်သောင်းမျှသော လူစုလူဝေးကြီးတစ်ခုလုံး၏ စားသောက်သွားလာနေထိုင်မှု ကိစ္စ မှာ အလွန်ကြီးကျယ်သောကြောင့် စစ်ပြေးချိန်မှတစ်ပါး အမြဲတမ်းတစ်သမတ်တည်း တစ်သောင်းလုံးစုဝေး၍နေထိုင်ရေးမှာ မလွယ်ကူတော့ပေ ။ အုပ်ချုပ်သူဘုရင်အနေဖြင့်လည်း ထိုသူတို့၏ ရိက္ခာဖုံလုံရေးတာဝန်ကိုယူရသည်မှာမသေးငယ်လှပေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရင်သည် မိမိအုပ်စုကြီးအားကစ္ဆပနဒီ မြစ်ဖျားအရပ်ရှိ စိမ်းလန်းစိုပြည်၍ အသီးအနံ ဖြစ်ထွန်းမည့်နေရာ ဒေသအသီးသီးသို့ ခြံဝိုင်းကြီးမှ ခွဲထွက်စေပြီး နေရာသီးခြားပြုကာ နေထိုင်ခွင့်ပေးလေသည် ။နေထိုင်ခွင့်ပေးလေသည်။ ဘုရင်၏ အမိန့်တော်အရခြံစည်းရိုးအတွင်းမှ သီးခြားအုပ်စုခွဲအဖြစ် နေထိုင်ရန်ထွက်လာသူကို ''မရူ'' ''မရုပ်''ဟူသော အခေါ်မှ ''မရို'' ဟု ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပေသည်။ ''မရို'' ဟူသော အသုံးအနှုန်းမျသည် ယခုအခါ တွင် ''မြို'' ဟူ၍ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။ ''မြို'' တို့သည် ဥဒလင်း ၊ မီးချောင်း ၊ကလပ်ချောင်း ၊ စသည့် ဒေသများတွင် အုပ်စုခွဲကာ နေထိုင်ကြလေသည် ။ထို့ကြောင့်နေထိုင်ကြလေသည်။ထို့ကြောင့် ''မြို'' သို့မဟုတ် ခြံစည်းရိုးအတွင်းမှ လူသားများသည် အာသမ်နယ်ဘက်မှ ဆင်းသက်လာပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ရခိုပြည်နယ်၊ ကဇ္ဈပနဒီ မြစ်ဝှမ်းဒေသ၌ အထင်အရှားရှိနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပါးစပ်ရာဇဝင် များအရလေ့လာ သိရှိရပေသည်။။အနောက်မဇ္ဈိမမှ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် မြို တို့သည် [[ဟိမဝန္တာ တောင်တန်း|ဟိမဝန္တာ]]တောင်ခြေများကို ဖြတ်ကျော်လျက် တိဗက်ကုန်းပြင်မြင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်ဟု ရှေးဘိုးဘေး၊ ဘီဘင်တို့၏ နှုတ်ဆင့်ကမ်းစကားအရလည်းကောင်း၊ မြို ဘာသာစကား၊ တေးလင်္ကာပုံပြင်၊ ဝတ္ထုအရလည်းကောင်း သိရသည်။ တိဗက်မှတစ်ဆင့် အာသံ၊ မဏိပူရသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီး နောက်တစ်ဖန် ယင်း [[အာသံပြည်နယ်|အာသံ]]၊ [[မဏိပူရပြည်နယ်|မဏိပူရ]]မှ တစ်ဆင့် ခြေဦးတည့်ရာသွားကြပြန်ရာ ယခု ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့၊ အရှေ့ဘက် (၁၀) မိုင်ကျော်ခန့်အကွာ မြို ဘာသာစကားဖြင့် ကိမ္မာ ခေါ်ဆိုသည့် [[ကျောက်ပန်းတောင်]]နှင့် နီလာပန်းတောင်သို့ ရောက်ရှိ အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ တဖန် ၁၄ ရာစု နှင့် ၁၇ရာစုကြားကာလတွင် မြို လူမျိုးများကို ခူမီး လူမျိုးတို့က တိုက်ခိုက်၍ လည်းကောင်း ၊ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှု လည်းကောင်း စစ်တကောင်းတောင်တန်း ‌‌‌‌‌ဒေသ ဘန်ဒရာဘင်([[Bandarban]] ) ၊ အိန္ဒိယနယ်စပ် ဘဂ်ါ (Bengal ) နှင့် အရှေ့ ပါကီစတန် အထိ ပျံ့ နှံ့ ရောက်ရှိသည်။ ယခုတိုင် ၎င်း နေရာများတွင်နေထိုင်ကြသည်။ အချို့ တို့သည် ပီချောင်း ၊ မီးချောင်း ၊ [[ကုလားတန်မြစ်|ကုလာတန်မြစ်]]ကြော မှ ယင်းမှတစ်ဆင့် အချို့သည် [[ကစ္ဆပနဒီ]](ကုလားတန်မြစ်)၏ အထက်အောက်နှင့် လေးမြို့မြစ်တစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့စွာ ဆင်းသက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရှေးလူကြီး သူမတို့၏ ပြောစကားအရ မြို သည် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ရန်မှလည်းကောင်း ၊ ဟိယာဟုခေါ်သော စစ်ရန်မှလည်းကောင်း ကာကွယ်ရန် ခြံစည်းရိုးခုနှစ်ထပ်ဖြင့် ကာရံလျက် နေထိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းသို့ ခြံစည်းရိုးခုနှစ်ထပ်ဖြင့် ကျားရဲတိရိစ္ဆာန်တို့၏ ဘေးရန်မှ ကာကွယ်နေထိုင်ခြင်းကို ရှေးပညာရှိများက [[မြိုဘာသာစကား|မြို ဘာသာစကား]]၊ ခြံစည်းရိုး အခေါ်အဝေါ် မြို ကို အခြေပြုပြီး ခြံစည်းရိုးအတွင်းနေထိုင်လူ(လူမျိုး) မြိုလူမျိုးဟု သမိုင်းမှတ်တမ်းများ တင်ခဲ့ကြပါသည်။<ref>.မယ်ယုတောင်စွယ်ကြားမှ သွေးချင်းမောင်မယ်များ(သျှင်ထွေးယဉ်)<br /></ref>
မြိုလူမျိုးတို့တွင် မြိုအမျိုးကွဲပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ခန့်ရှိသည်ဟူ၍ အဆိုရှိကြပါသည်။ သို့သော် ယခုအခါ မြိုအမျိုးကွဲပေါင်း (၅၇) မျိုးခန့်သာ ရှာဖွေတွေ့ရှိရကြေား၊ ယင်းအထဲတွင်လည်း အမှန်တကယ်အားဖြင့်ရှိနေသော မြိုမျိုးကွဲမှာ (၃၀) ဖြစ်ကြောင်းအဆိုရှိကြပါသည် ဟု ရှုဒေါင့်ဂျာနယ် (စာမျက်နှာ-၃၅) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၁၈၇၉-ခုနှစ်က British Burma Gazetteer စာအုပ် (စာမျက်နှာ-၄၂၅ ) တွင် Fifteen clans of Mro named -မြို မျိုးကွဲပေါင်း (၁၅) မျိုးတွေ့ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။<ref>British Burma Gazetteer Vol.ll in 1879 , P. 425</ref> သမိုင်းတွင် ဖော်ပြရေးသားချက်များသည် လက်လှမ်းမီ သည်အထိသာ ရေးသားခြင်းဖြစ်ပေမည် မိမိ ကိုယ်၌ပင် ယခုတိုင်တိတိကျကျ ဖော်ပြရန်မလွယ်ကူပေ။ မြိုလူမျိုးသည် လူဦး‌ရေနည်းသလောက် မျိုးကွဲများပြားသည်။ ယခုအခါတွင် မြိုမျိုးကွဲများသည် (၇၀) မျိုးရှိကြောင့် ရှာဖွေလေ့လာတွေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-၁။ပလောင်ဒို 2။ တင်မ်တူ ၃။ဆွေ၄။ဆာမ်လာမ်၅။ပြန့်စာ ၆။ဆင်ကာလ်စာ ၇။ဘွေမာ ၈။ဟရိကလောင် ၉။ခွာ ၁၀။အာလှာမ် ၁၁။ဒန် ၁၂။ကုံမ့်စာ ၁၃။ ဒိန်တင့် ၁၄။ ဘွေတိန် ၁၅။မာလှာမ်မာ ၁၆။နိုနှာမ် ၁၇။နိုလှာမ် ၁၈။ကုမ့်စာ ၁၉။ ပေးနှာမ့် ၂၀။ ပြန်မ်ဆင် ၂၁။ ခိုင်စာ ၂၂။ ဆင်ရိုးစာ ၂၃။ကြောင်ဝေ့စာ ၂၄။ပေါင့်စာ ၂၅။ငါ့မာ ၂၆ ။ ဟန်းလာ့ ၂၇။ ယောမ့်ရဲ့ ၂၈။ပက်တိယာ ၂၉။ ဆင်ပြော့စာ ၃၀။ လန်းပြိုစာ ၃၁။ရွေ့စာ ၃၂။မရာစာ ၃၃။ဖလောင် ၃၄။တာမ်ဆင် ၃၅။ရဟစာ့ ၃၆။ တိန်မ်ကမ် ၃၇။ မင့်စာနှာမ် ၃၈။နာမ့်သရှိန်း ၃၉။ နာမ့်ဆစာ ၄၀ ။ ဟွာမာ ၄၁။ပုလ်စာမ့် ၄၂။ ရုံမ်ထူတင့် ၄၃။ပေါင်မိတင့် ၄၄။ မေ့မတင့် ၄၅။ရန်လိပ်စာ ၄၆။ ခုံမ်စာ ၄၇။ ရန်မိတ်စာ ၄၈။ လင့်စားတင့် ၄၉။ တောင်န် တင့် ၅၀။ ယာမ့်မာတင့် သို့မဟုတ် ယာမ်မာဆောင်အိုင်မ်းတင့် ၅၁။ ရိုမ်စာ ၅၂ လိင်မ် ကန့်စာ ၅၃ ရပေါစာ ၅၄။ ရုံမ်ထူ ၅၅။ ငါ့ရွာ့ ၅၆။နာမ့်ဖန်ဒန် ၅၇။အွေထနိ့ဒန် ၅၈။ စတုဒန် ၅၉။ရောင့်ဒိမ့် ၆၀။ဒက်ဒိမ့် ၆၁။နှာမ်ဒေါင့်မ် ၆၂။ပလက်ဆင် ၆၃။ဝင့်ကို ၆၄။ ဒန်ပရာမ့်နှာမ့် ၆၅။ ကွိုင်စင့်မ် ၆၆။ အောမ်စမ့် ၆၇။ ဆာရမ်စာ ၆၈။ စတု ၆၉။ တိန်စာ ၇၀။ရန်တိန်စာ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ဤသို့ မျိုးကွဲများပြားသည်အလျောက် ခရီးသွားသည့်အခါမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာ သို့ ဝင်လျှင် ၎င်းရွာတွင် မိမိအမျိုး ရှိမရှိကို မေးမြန်းရသည် အမျိုးတူ ရှိပါက ၎င်းအိမ်တွင်တည့်ခိုလေ့ရှိသည် အိမ်ရှင်တို့ကလည်း မိမိအမျိုးရောက်လာသော ဧသည်အား ပျုငှာ စွာ ဧည်းဝတ်ပြုရသည်။ အမျိုးမရှိပါက ကျေးရွာ လူကြီးအိမ်တွင် တည့်ခိုလေ့ရှိသည် ။ချစ်စရာဓလေ့မှာတည့်ခိုလေ့ရှိသည်။ချစ်စရာဓလေ့မှာ ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် ရောက်လာသော ဧသည် သည် မိမိအမျိုး မဟုတ်သော်လည်း အိမ်နီးချင်း များက ဟင်းပွဲ တစ်ပွဲ နှင့် ထမင်းပုကန်တစ်ခု ဧည်းသည်တည့်ခိုသည့် အိမ်သို့ ပေးပို့ လေ့ရှိကြသည်။ ထို့အပြင် ဧသည် အိပ်ရန် ရိုးရာခြုံထည်စောင် လည်း ပို့လေ့ရှိကြသည်။
== ဘာသာ သာသနာ နှင့် စာပေ ==
မြိုလူမျိုးတို့၏ ''Krama''-ကရာမာ ဘာသာ သာသနာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း သည် ဘင်္ဂလားဒေရ် ့စစ်တကောင်းခရိုင် ၊ခမောင်းဖြူကျေးရွာ၌ နေထိုင်သော ဦးမာန်ဆိန်း (Man Chien )၏ ဇနီးဒေါ်(Arue Tun Te) သည် တောထဲသို့ ထင်းခွေသွားရာ အတောင်ပံပါသော ကောင်းကင်တမန်တော်တစ်ပါးကို မြင်ခဲ့ပြီး မကြာမီအချိန်တွင်းမှာ ပဋ္ဋိသနေ​္ဒစွဲနေသည်။ ''Arue Tun Te'' သည် ကိုးလလွယ် ဆယ်လမွေး ပြီး သားယောကျၤားကိုဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ထိုသားကို ''Manley မန်လေ'' ဟုအမည်ပေးလေ၏ ။ဟုအမည်ပေးလေ၏။ ''Manley Mro-မန်လေမြို'' သည် ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် သူများနှင့်မတူသည့် အတွေ့အခေါ်၊ အမြော်အမြင်ရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည် သာမက ဉာဏ်ရည် ထက်မြတ်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ မိဘနှစ်ပါးသည် သူတို့၏ သားဖြစ်သူ "မန်လေ'' ကို ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ချင်သော ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေရ့်နိုင်ငံ စစ်တကောင်းပြည်နယ်၊ (Slogute or I cha school ria) အမည်ရှိကျောင်းတော်၌ ပညာသင်ယူရန်စေလွတ်ခဲ့ပါသည် ''မန်လေ'' သည်ဉာဏ်ပညာထက် မြတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း အလွန်ပျင်းရိသော သူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ၏ဆရာ/မများသင်ပေးသော ကျောင်းစာကိုစိတ်မဝင်စားဘဲ တောထဲကို သာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သွားတတ်ပြီး တစ်နေ့တွင် စာသင်ခန့်ထဲ၌ အိပ်ပျော်နေစဉ် အိပ်မက်ထဲတွင် ကောင်းကင်တမန် ဟုခေါ်သော ''Krama Mu Mang'' သည် ကမ်ဘာပေါ်တွင် မရှိသည့် စာပေ တစ်မျိုးကို ''မန်လေမြို'' အားပေးလိုက်သည်။ အိပ်ရာမှ နိုးလာသည်နှင့် ထိုစာပေ ကို ရေးလေသည်။ ထိုစာပေ ၏အမည်မှာ မြို စာပေတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး (၃၁) လုံးဗျဉ်းအက္ခရာ ရှိ၍ (၃၁) ဗျဉ်းအက္ခရာသည် [[လူ့ဘုံ (၃၁-ဘုံ)|လူ့ဘုံ]]၊ နဂါးဘုံ၊ နတ်ဘုံ၊ [[ဗြဟ္မာဘုံ]] စသည့် ဘုံအဆင့်ဆင့်မှ တစ်ခုစီယူလာ၍ ဗျဉ်းအက္ခရာ (၃၁) လုံးကို ကောင်းကင်တမန်က ''မန်လေးမြို''အား (မြို ကရာမာ)စာပေနှင့် အတူ (မြို ကရာမာဘာသာ တရား )လည်း စတင်ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ ထိုစာပေ ကို ရရှိသည်နှင့် ''မန်လေ''သည်သူ၏နဂို ဉာဏ်ရည်ထက် ပညာကြွယ်ဝလာသည်။ သူ၏ဆရာ ကစာတစ်ကြောင်း သင်ပေးလျှင် နှစ်ကြောင်း ပိုရသည် ။ပိုရသည်။ ဥပမာ- သူ၏ဆရာသည် သူ့ကိုစာမသင်ပေးခင်ကတည်းက ရှေ့မှာသင်ယူရမည့် သင်ခန်းစာများကို ကြိုသင်သိရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ပညာထက်မြက်ပြီး မကြုံစဖူးသော အရာများကို ကြုံတွေ့နေရသည့် ကျောင်းဆရာသည် အံ့ဩ ပြီး ''မန်လေး''ကို ကျောင်းထုတ်လိုက်လေသည်။ ထိုကျောင်းကနေ ထွက်ပြီး မွေးရက်မြေ ကိုပြန်လာသည်။ သူ၏ဇတိမြေရပ်ဒေသသို့ ရောက်လာသည်နှင့် သူမွေးဖွားခဲ့သော အိမ်နေရာ၌ ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် မိဘ နှစ်ပါးထံတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်၌ သူများမမြင်ဖူးသောစာပေ များ ၊ အတွေ့အခေါ်အပြောအဆိုများနှင့်ပြည့်စုံသည့်''မန်လေး''ကိုအရူးဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်။တစ်နေ့မှာသူ၏မိခင်ကသူ့ကိုနောက်ကျောပို့ရန်ငြင်းဆိုရာအတိတ်ဘဝဟောင်းကသူသည်ဂဏန်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့်အကြောင်းကိုဖွင့်ပြောလိုက်လေသည်။ ဤသို့ပင် သူသည် ကြီးပြင်းလာပြီး တောနက်ကြီးထဲတွင် တရားထိုင်လျက်နေလေ၏ ။ရက်၊တရားထိုင်လျက်နေလေ၏။ရက်၊ လ၊ အတော်ကြာ သူတရားထိုင်နေစဉ် ဗိုက်ဆာလာသောအခါ ကျားကြီးတစ်ကောင်က ပန်းတစ်ပွင့် ကိုးလာဆက်သလိုက်သည်။ ထိုပန်းပွင့်၏ အမွှေးအနံ့ကြောင်း ဗိုက်မဆာတော့ပေ။ ''မန်လေး'' သည် တရားထိုင်သည့်အချိန်ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ခရီး ထွက်ရန် တရား ထိုင်ရာမှ ထွက်ခွာပြီး (Spark) ဟုခေါ်သော ချောင်းကိုရေဖြတ်ကူးနေစဉ် ကောင်းကင်တမန်တော်က သူ၏ လက်နှစ်ဖက်ကိုကိုင်ကာ ကူညီလိုက်သည်။ ''မန်လေး''ကိုပန်းဆက်သလိုက်သည့်ကျားကြီးကလည်းတစ်ဖက်ကိုင်းထိကူပြီးဘေးအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ပေးရန်စောင့်ရှောက်လိုက်ပါခဲ့ပါ။သည် [[ကီမိုတောင်]] ဘက်သို့ ခရီးသွားလိုသည်ဖြစ် ၍ တော ၊တောင်ကိုဖြတ်ကာ ချင်းပြည်နယ်၊ [[ပလက်ဝမြို့]]နယ် အုန်းသီးဝရွာ သို့ ရောက်ခဲ့ဖူးသည်ဟုသိရသည်။
ထို့နောက် ပလက်ဝမြို့နယ် ဆမီးကျေးရွာ၌နေ ထိုင်သော မြိုလူမျိုး ''Aman '' ဆိုသူတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ ထို ''Aman'' အမန် ဆိုသော လူသည် ပုဏားကျွန်းမြို့နယ် [[အထက်မြတ်လှဲရွာ|အထက်မြတ်လှဲ]]ရွာ ၌ ယနေ့(၂၀၁၃) နှစ်ထိ အသက်ရှင်လျှက် ရှိပါသည်။ ''အမန်း'' ကို ''မန်လေး'' ကဘိသိတ်တန်ခိုး ပေးရန် နှင့် (ကရာမာ) သာသနာပြုဆရာ လုပ်ရန် တိုက်တွန်းသည်။ သူသည် အရက်သေစာအနည်းငယ်သောက်စားသောကြောင့် သူ၏ ဆန္ဒကိုငြင်းဆိုလိုက်သည်။
သို့သော်လည်း ''မန်လေး'' သည် သူပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သော''အမန်း''ကို သူ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် တောဆေး ပညာနှင့် ကောင်းစားဘို့ရန် ဘိသိတ်ပေးလိုက်သည်။ ပထမ ဆုံး နှင့် နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံ ခဲ့သည့် ''အမန်း'' ၏နုတ်ထွက်ဆိုချက်သည် သူသည် အရပ်အမြင့် ၆ ''ပေရှိပြီး ''မန်လေး'' သည် အရပ် ၅'' ပေကျော်သာရှိသည်။ သို့သော်လည်း ပြိုင်တူ ရပ်လျှင် ''မန်လေး''ကအရပ်ပိုရှည် သည်ဟု ဆိုပါသည်။
''မန်လေး'' သည် ''နောင်လာလတ္တံတွင် ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတေ္တယျ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ယင်းတို့၏ ဘုရားရှင် အစစ်အမှန် ဖြစ်မည်ဟုဆိုပါသည် ။ဖြစ်မည်ဟုဆိုပါသည်။ ထို အဆိုအရ အရိမတေ္တယျမြတ်စွာဘုရားအား ''မြို''တို့ ဖူးမြော်နိုင်ရန် အလို့ ငှာ (Krama ကရာမာ ဘာသာအားယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြရန် ရည်ရွယ်၍ သိကြားမင်း က ''မန်လေး'' ဆိုသူ ပုဂိုလ်တစ်ဦးအား တမန်တော်အဖြစ်စေလွှတ်ခဲ့သည်။''<ref>12.	Mro-A Typeface for Mro A Chittagong Hill Tract Language Script</ref><ref>Morphosyntactic Analysis of Mro Language</ref>
== မြိုစာပေ ==
[[ဖိုင်:Mru family in traditional household.jpg|thumb|259x259px|မြိုလူမျိုးအိမ်သားပုံ]]
မြို အမျိုးသမီး တို့သည် နောက်တွဲဆံထုံး ကို ထုံးဖွဲကြသည်။ ခေါင်းနောက်တည့်တည့်၌ ဘီးကို စိုက်ထိုးလေ့ရှိပါသည်။ ဆံညှပ် ၊ ဆံထိုးများဖြင့်လည်း တန်ဆာဆင်လေ့ရှိသည် ။အိမ်ထောင်တန်ဆာဆင်လေ့ရှိသည်။အိမ်ထောင် ရှိသူအမျိုးသမီးများသည် ဦးခေါင်း တွင် အရှည်တစ်ကိုက်ခန့်ရှိသော အဝတ်စကို ခေါင်းတွင် ရစ်ပတ်ပြီး နောက် ဘက်ဆံထုံး၏အောက်၌ ချည်နှောင်ထားလေ့ရှိကြသည်။ နားတွင်ကား ခေါင်းပွ အဝကျယ် နားတောင်း ကို ဆင်မြန်းလေ့ရှိသည်။ လက်ကောက်၊ လက်ကြပ်၊ လက်စွပ်၊ ခြေချင်း၊ တို့ကိုလည်း ဝတ်ဆင်ကြသည်။ လည်ပင်းတွင်လည်း သန္တာစေ့ပုတီး၊ ဒင်္ဂါးပုတီး နှင့် ပုတ်စေ့ ပုတီးတို့ကို လည်း ဆွဲလေ့ရှိကြသည်။ ရှေးရှေးက မြို အမျိုး သမီးများသည် ကိုယ်ခန္ခာ အပေါ်ပိုင်းတွင် အဝတ်မဲ့နေလည်းရှိပါသည်။ ခါးအောက်ပိုင်းတွင်မှု အနံတစ်တောင်၊ အလျားနှစ်ကိုက်ခန့် ရှိသော ဂျပ်ခုတ်ထည် အနက်ရောင်ကို ချက်အောက်တွင်ပတ်၍ ဝတ်ဆင်ကြသည်။ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ဘယ်ဘက်ပေါင်ပေါ်တွင် အောက်ဘက်၌ နှစ်လက်မခန့် ကွဲစေလျက် ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ဤသို့ပြုလုပ် ထားရခြင်းမှာ ထိုင်ရာ ၊သွားရာ၌ လွယ်ကူစေရန် ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ဝတ်ဆင်သည့်အခါ ရှေးဦးစွာ ခါးတွင် ကြိုးတစ်ချောင်း ချည်နှောင်ထားရသည်။ ပြီးမှ အဝတ်ကို အထဲသို့ ထိုးသွင်းကာ ဝတ်ဆင်ကြသည် ။ဝတ်ဆင်ကြသည်။ အပေါ်တွင်မှ သန္တာစေ့ခါးပတ်ကြိုးများကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ ပွဲလမ်းသဘင်နှင့် ဈေးဝယ်သွားသည့်အခါမျိုးတွင် အိန္ဒြေလုံစေရန် အနံတစ်တောင် ၊အလျားနှစ်ကိုက်ခန့်ရှိသော အဝတ်ကို ဆင်မြန်းကြသည်။ အနံဘက်မှ အစနှစ်စကို ဘယ်ဘက်လက်မှ လက်ကတော့ထိုးကာ လက်ယာဘက်ပခုံပေါ်တွင် စု၍ချည်နှောင်ထားလေ့ရှိသလို ရှေ့ဘက်ထိချပြီး ချိတ်နှင့်ထိုး၍ လည်း ဝတ်ဆင်လ့ရှိကြသည် ။ဝတ်ဆင်လ့ရှိကြသည်။ ရခိုင်ပြည်တွင် ဘုရင်အဖြစ်ကိုပင် ရောက်ခဲ့သော်လည်း မြုံ လူမျိုးတို့သည် ခေတ်အလိုက်ပြောင်းလဲလာသော လူ့ယဉ်ကျေးမှုများကို ထွေပိုက်လိုဟန် မရှိပါ။ ယင်းအကြောင်းကို ပန်းတံမောင်နှင့် သံတွဲသူဘွဲ့ အဲး" မှ မြုံ (မြို)တို့၏ သဘာဝ အသွယ်သွယ်ကို ဖော်ပြ ချက်များတွင် တစ်နေရာ၌ ထဘီတိုလောင်း၊ မြို ဘာသာမှာ ၊ ဝါးနားတောင်း၊ မြိုမဘာသာ၊ ဖုန်းဆိုးတောင်မှာ ၊ဝါးကောက်လားရေ၊ ကျပ်ကြိုးသုံးပင်၊ လွန်သုံးပင်၊ ဇင်ချောင်းမြောက်ကို၊ လှေကားတင်ရေ၊ ထုပ်လုပ်ကေလုံး၊ မြိုမရိုမှာ၊ ရင်မဖုံးလေဟု ဖော်ပြထားပါသည်။<ref>ရိုးမခေါ်သံ မောင်စံဖော်(စာ၁၂-၁၅)(စာ ၁၆-၁၉).</ref>ယခုအခါ 'မြို'အမျိုးသမီးများသည် သာမန်အချိန်၌ မြန်မာအမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင် ဝတ်ဆင်လာကြပြီ ပွဲလမ်းသဘင်ရှိမှသာ ထိုဝတ်စုံကို အပေါ်မှထပ်၍ ဝတ်ကာ ရိုးရာဝတ်စုံအနေဖြင့် ဝတ်ဆင်ကြသည်။
== ရိုးရာ မင်္ဂလာပွဲ ==
PRINTED AT THE GOVERNMENT PRESS. 1879: Rangoon,p, 425.</ref>ထို့အပြင် မိန့်ကလေး မိဘများအတွက် တောင်ယာလုပ်ကိုင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဓားရှည် ၅ လက်၊လှံ ၇စင်းတို့ကိုပါ ပေးကြရသည်။
မြိုတို့ ဓလ့ထုံးတမ်း အရ လက်ထပ် မင်္ဂလာ ပြုလုပ်ချိန်မှစ၍ မင်္ဂလါတစ်သက်တွင် ပွဲ (၃) ကြိမ် ပြုလုပ်ရသည် ထိုပွဲတိုင်း၌ (ယု)ခေါ်သည့် ရိုးရာ[[ခေါင်ရည်]] မပါ မဖြစ် ခေါရည်တည်ထားရသည်။ လက်ထပ်ပြီဆိုသည်နှင့် ပွဲသုံးကြိမ် (ဝှပ်လိုင်မ်) ၊ (မင်တင်) နှင့် (ဘုတ်အက်) ဟူ၍ ကျင်းပရသည်။ ထိုပွဲ (၃) ကြိမ် ပြုလုပ်ရာမှာ (အသွင်းဖိုး) ပေးရသလို ဟင်းပွဲ ဖလှယ် မိတ်ဆုံထမင်းစားကြသည်။ ယောကျ်ားလေး အမျိုးဘက် မှ ကြက်ကို စုဆောင်းရပြီး မိန့်ကလေး အမျိုးဆွေမျိုး ရောက်ရှိလာသည့် ဧည့်သည် များအားလုံလောက်သည် အထိ ကြက်ကို သတ်ရသည် ။သတ်ရသည်။ အလားတူမိန့်ကလေး အမျိုးဘက် ကလည်း ဝက်ကို ကြိုမွေး ထားပြီး ငါးဆုပ်ပြည့်သည့် ဝက်ထီးကို ယောကျ်ားလေးအမျိုး မှ ရောက်ရှိလာသည့် ဧည့်သည် များအား လုံလောက်သည် အထိ ကျွေးမွေးဧည့်ခံရသည်။ အကယ်၍ ဧည့်သည်များ၍ ဟင်းမလုံလောက်ပါက ဝက်တစ်ကောင်နောက်ထပ် သတ်ရသည် ။သတ်ရသည်။ ထို ပွဲတွင်မိန့်ကလေးအမျိုးဧည့်သည်များစားရန်အတွက် ယောကျ်ားလေး အမျိုးဘက် မှ ပါလာသော ကြက်ကို ယောကျ်ားလေး အမျိုးက ကြက်ကောင် ကို ဖျက်ပြီး ချက်ပေးရသည့် ဓ လေ့နှင့် ၎င်းပွဲကိုကျင်းပရသည်။ သို့သော် ၎င်းပွဲတွင်လုံးဝဟင်း မြည်းစမ်းခြင်း မပြုပေ။ ထိုအပြင် ကြက်တစ်ေကောင်ကို အခေါင်းစုံ မစုံ၊ ခြေစုံ မစုံ ၊ အတောင်ပံ စုံ မ စုံ ၊ခြေသည်းခုတ် မခုတ်သတိထားရသည် အကယ်၍ မိန့်ကလေးအမျိုးဧည့်သည် များ စားသည့် အခါ တွင် ကြက်တစ်ကောင် တွင် တစ်ခုခု မစုံ တွေ့ရှိပါ က လျော်ကြေးငွေ ပေးရသည်။ယင်း လျော်ကြေး မှာ အရက် သို့မဟုတ် ခေါင်ရည်သို့မဟုတ် [[ဓား]] သို့မဟုတ် လှံ စသည်ဖြင့် လျော်ကြေးပေးရသည်။ ယောကျ်ားအမျိုး ဧည့်သည်များ စားရန်အတွက် မိန့်ကလေးအမျိုးဘက်မှ ဝက်ကောင်ကို ဖျက်ပြီး ချက်ပေးရသည် သို့သော် အလားတူ ၎င်းပွဲတွင် လုံးဝဟင်းမြည်းစမ် ခြင်းကိုကခွင့်မပြုပေ။ မိန့်ကလေး မိဘ နှင့် မောင် တို့ကို ကားအခြောက် သတ်ထားသော [[တောကြက်]]၊[[တောဝက်]] ၊ [[ရှဉ့်|ရှဥ့်]] သားခြောက် တစ်မျိုးမျိုးကို ချက်ပြီး ဟင်းပွဲပြင်ပေးရသည်။ ထိုနေရာ၌ပင် ‘’ယင်းတို့နှစ်ဦးသည် အဆိုပါ ဟင်းကိုမစားမီ စေ့စပ်လမ်းစဉ်အခါက ညှိနှိုင်းထားသည့် ဓား၊ လှံ တို့ကို တောင်းဆိုကြသည်။ သတို့သားဘက်မှ ဖခင်ဖြစ်သူက စကောတစ်ချပ်ထဲတွင် အဆိုပါ ဓားနှင့်လှံ ၊မင်္ဂလာကြေး ကို ထည့်ကာ ပေးရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဓားနှင့်လှံကို လက်ခံရယူပြီးသည့်အခါမှသာလျှင်’’ ပြင်ဆင်ထားသည့် ဟင်း နှင့် (ယု)ခေါင်ရည်ကို သောက်စားကြလေသည်။ပြီးနောက်’’ဆွေမျိုးဧည့်ပရိသတ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင် သတို့သမီး ဖခင်ဖြစ်သူက သတို့သားကို နှစ်ကိုက်မျှရှည်သော အဝတ်ဖြူ တစ်စဖြင့် ခေါင်းပေါင်းပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သားမက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလေသည်။’’လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲ သည် အနောက်ဘက် မောင်တောနှင့်ဘင်္ဂလားဒေရ့်ဘက် က အများအားဖြင့် မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပပုံ တူသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဘူးသီးတောင် ဘက် က( ရိုင်မာ) ၊ ပုဏားကျွန်း(တင်ဆာ) နှင့် ကျောက်တော် ယိုးချောင်းဖျား(နောက်ကော)ဘက်က တူညီသည်ကိုတွေ့သည် အများအားဖြင့် မောင်တောဘက်နှင့် ဘင်္ဂလား ဘက် လက်ထပ်မင်္ဂလာကျင်းပပြုလုပ်ပုံသည် ပို ကြီးကျယ်သည်ဟု ဆိုလို့ရပါသည်။
[[ဖိုင်:Mro indigenous 'Plung' (Flute), ChimBuk, BandarBan © Biplob Rahman-6.jpg|thumb|255x255px|မြိုလူမျိုးတို့၏ တေးမှုတ်တုရိယာပုံ]]
ပြီးနောက် ရွာတည်မည့် မျိုးနွယ်အကြီးအကဲ သို့မဟုတ် ကျေးရွာလူကြီးခေါင်းဆောင်က အိပ်မက်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ရွေးချယ်ကြသည်။ [[အိပ်စက်ခြင်း|အိပ်မက်]] တွင် ငါး ၊ရေကြည် ပြင် ၊ မြင်မက်က ကောင်း၏ ။ထိုနေရာကောင်း၏။ထိုနေရာ တွင် ရွာတည်ကောင်း၏ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမည်၊ ငွေရေးကြေးရေး အဆင်ပြေမည် ယူဆကြသလို ပန်းနီ ၊ မြွေ ၊မီး ၊မိုး မြင် မက်ပါက လူသေများမည်၊ ပြဿနာများမည် စီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးနည်ဟု ယူဆကြလေသည်။<ref>THE BRITISH BURMA GAZETTEER IN TWO VOLUMES. VOZi. II PRINTED AT THE GOVERNMENT PRESS. 1879: Rangoon,p, 425.</ref>
ရိုးရာအိမ်ကို သစ်ဝါးကို အခြေခံ ကာ တည်ဆောက်ကြသည်။ သို့သော် များသောအားဖြင့် ဝါးဖြင့် ခြေတံရှည်အိမ်များ ကို တည်ဆောက်ကြသည်။ <ref>https://www.researchgate.net/publication/226498628_Housing_pattern_and_food_habit_of_theMro-tribe_community_in_Bangladesh_A_forest_dependence_perspective မြိုလူမျိုးတို့ ရိုးရာအိမ်တည်ဆောက်ပုံအကြောင်းတရား။</ref>အိမ်မဆောက်မီ လိုအပ်သော ဝါး ၊သစ်များ ၊နှီး များကို စုဆောင်းပြင်ဆင်ထားရသည် ။စုဆောင်းပြင်ဆင်ထားရသည်။ ''အိမ်တည်ဆောက်ရာတွင် ခေါင်တိုင်ကို မင်္ဂလာ တိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ဦးစွာစိုက်ထူလေ့ရှိသည် တိုင်ကို အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင်စိုက်ထူရသည်။ ပြီးနောက် မြိုတိုင်းရင်းသားရိုးရာအိမ်များသည် အရှေ့ဖက်တည့်တည့် မျက်နှာမူလေ့မရှိပေ။အလျားလိုက် ရှေ့ဖက်နေထွက်ရာဖက်မှအနည်းငယ်စောင့်ကာ ဆောက်လေ့ရှိသည်။ အမိုးအကာ နှင့် လိုအပ်သည့် အခင်းတို့သည် ဝါးလုံး ၊ ဝါးရွက်နှင့် သက်ကယ် များကို အသုံးပြုကြသည်။ အိမ်ဆောက်လုပ်ရာတွင် `အိမ်မ`နှင်`့ မောင်းကာ` ဟု၍ ရှိသည် ''အိမ်မ''ကို (ကိမ်-Kim ) အိမ်မကို(ကိမ်မာ-Kimma) အိမ်ဖိုကို(ကိမ်တောမ်-Kimtom) ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါက ''မောင်းကာ'' ကိုရှေ့တစ်ဆောင် နောက်တစ်ဆောင် တွဲ ဆောက်လေ့ရှိသည်။ အနောက်ဖက် အဆောင်ငယ်သည် အိမ်တွင်း အသုံးပြု မည့် ပစ္စည်းများ တိုထားရာနေရာ၊ ရှေ့ဖက်အဆောင်ငယ်သည် ဧည့်သည် ခန်း အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ''အိမ်မ'' သည် မိသားစု အိပ်ခန်း ရိုးရာ တန်ဖို့ထားရသည့် ပစ္စည်းများ ထားရသည် အတွက် အပြင်လူ ဝင်လေ့မရှိ။ အိမ်ခေါင်သည် ခေါင်ချိုး ဖြစ်သည် ဘယ်ဘက်ထောင့်နားမှာ ရေစင်ရှိပြီး ညာဖက်ထောင့်တွင်အိုးခွက် ပန်းကန် ၊[[ဟင်းသီးဟင်းရွက်]]ထားရာစင်၊ အိမ်မ ထောင့်တွင် မီးဖို ရှိသည် မီးဖိုသည် စနေနေ့လုပ်လေ့မရှိပေ အကြောင်းမှာ စနေသည် မီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားပါသည်။။မီးဖို လုပ်သည့် အခါတွင် မြေသားကို ပလှိုင်းတောင်းဖြင့် စုံ ဂဏန်းမဖြစ်ရ မြေအရေအတွက် မ ဂဏန်းဖြင့်သယ်ရသည် မီးဖိုလုပ်ရာ၌ မရယ်ရ ရယ်မိရင် [[မီးဖို]] အက်ကွဲတတ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ မီးဖိုတန်း ပေါ်၌ ကျပ်စင်တစ်ခုရှိပြီး ရေဘူးခွန်ထည့်ထားပြီး ကြာရှည်ခံရန်နှင့်အနှံကောင်းစေရန် ဖြစ်သည်။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဓားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ သိနိုင်ပါသည်။ အိမ်တွင်လူ မရှိပါ က လှေကား ကိုမှောက်လှန်ထားခြင်း၊ဝါးထရံကာထားခြင်း ပြုလုပ်ထားလေ့ရှိသည်။''မြို''တိုင်းရင်းသားတို့၏ရိုးရာအိမ်ဆောက်လုပ်ပုံတွင်ထူးခြားချက်မှာ မိဘများ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလျှင် ကွပ်ပျစ်နှင့် တစ်ဆက်တည်းတွင် မိဘဆောင်ကိုတွဲ၍ ဆောက်လုပ်ပေးလေ့ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအဆောင်လေးမှာနှစ်လောက်စာနေလောက်ရုံအခန်းငယ်ကလေးဖြစ်သည်။<ref>Housing pattern and food habit of the Mro-tribe community in Bangladesh: A forest dependence perspective <br /></ref>
== တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ==
မြိုတိုင်းရင်းသားများသည် အဓိက စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းသည် [[တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး]] ဖြစ်သည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းသည် တောင်ပေါ်နေတိုင်းရင်းသားများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ တောင်ယာလုပ်တော့မည် ဆိုလျှင် ဦးစွာ မိသားစု လူဦးရေကိုကြည့်ရသည် မိသားစုများ နေလျှင် များသလို အကျယ် ချဲ့ခုတ်ထွင်းရသည်။ မိသားစုနည်းလျှင်နည်းသလို ခုတ်လေ့ရှိသည်။ ထိုကြောင့် မိသားစုများလျှင် မိသားစုနဲ့လုံလောက်သည့် ယာခင်း ကို စုံစမ်းလေ့လာရသည်။ သို့သော် အခေါင်း သုံး လုံးရှိသည့် ယာခင်းသည် နတ်ဆိုးအိမ်၊ တောင်ယာလုပ်လျှင်သေမည်ဆိုကာ ရှောင်လေ့ရှိသည်။ မိမိလုပ်ကိုင်မည့် ယာခင်းကို စုံစမ်းပြီးလျှင် ထိုတောင်ယာကို လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ဝါးပင် ငါး ပင်မှ ဆယ်ပင် လောက်မျှခုတ်ထားကာ အိပ်မက်ယူရသည်။ အိပ်မက်တွင် ရေပြင်၊ ငါး ၊ မြင်မက်က ကောင်း၏၊ မီး၊မိုး၊ သွေးမြင်မက်က မကောင်း ဟုအနက်ကောက်ကာ အိပ်မက်ရယူရသည်။ အိပ်မက်ကောင်း၍ စခုတ်တော့မည်ဆိုလျှင် ဦးစွာ ဓားသွေးကျောက်ပြားကိုယာခင်းတွင် သွားထားရသည် ထိုနေ့တွင် ဝါးဆစ်တစ်ပိုင်းကို ပိုင်းဖြတ်ကာ ရေပြည့်ရသည်။ရေပြည့်သည့် အခါ၌ ရေမြှုပ်ကို ကြည့်ပြီး ပေါက်ပင်များမည် မများမည်ကို ခန့်မှန်းရသည်။ ထိုဝါးဆစ်ပြည့်သည့်ရေပုလင်းကို ဓားသွေးကျောက်ပြားပေါ်ထားပြီး အလယ်တည့်တည့်ခွဲဖြတ်ကာ မျောက်ပိုင်းလှန်နေပါက နမိတ်ကောင်း သီးနှံထွက်တိုးကောင်းမည်ဟု နောက်ဆုံးယာခင်းခုတ်ပြီးသည့်နေ့ တွင် ပြုလုပ်ရသည် ။ထို့အပြင်ပြုလုပ်ရသည်။ထို့အပြင် တောင်စောင့်နတ်၊ ချောင်းစောင့်နတ် အရပ်လေးမျက်နှာ ရှိနတ်များအတွက် ယာခင်းကိုမီးရှိုးသည်အချိန်တွင် ထွက်ပြေးလွတ်နိုင်ရန် တုတ်ချောင်းလေးချောင်းကို ပစ်ပေးထားရသည်။ တစ်နှစ် တစ်နှစ် တောင်ယာကို ဇန်နာဝါရီလ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ လောက်မှ စတင်ခုတ်လဲပြီး တောင်ယာ တစ်ခင်းကို နှစ်လကြာခန့် ခုတ်ထွင်းပြီး မတ်လ တွင်မီးရှိုးရသည်။ ဧပြီ လတွင်ကောက်ပဲသီးနှံများကို စတင်စိုက်ပျိုးရသည်။ ယာခင်း တွင်မည်သည့် ပျိုးပင် ၊မျိုးစေ့ မချခင် ကြက်၊ ခွေး၊ ဆိတ် တို့ဖြင့် ယာခင်းကို သွေးပူဇော်ရသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းမစတင်ခင် တစ်ရွာလုံး ပေါင်း ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ် တို့ ဖြင့် ကပ်ဘေးဆိုးကျိုး ရွာသူ၊ ရွာသားများအပေါ် မဆိုက်ရောက်စေရန် နှင့် သီးနှံထွက် တိုးစေရန် ရွာခင်းပွဲကို ကျင်းပလ့းရှိသည် ။ကျင်းပလ့းရှိသည်။ ထိုအချိန်အတွင်း ရွာထဲတွင် ရွာသူ ရွာသားများသည် အလုပ်လည်းမလုပ်ရ အပြင်လည်း မထွက်ရ သလို မည်သည့် ဧည့်သည်ကိုမှ အဝင်မခံပါ ။ ဝင်မိပါက ထိုအခင်းပွဲတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးလျော်သည့်အပြင် အခင်းချိုးဖောက်မှု ဒဏ်ကျေးလည်း အကန့်သတ်မရှိ ပေးလျော်ရသည်။
== ရွာခင်းဓလေ့ ==
မြိုလူမျိုးဓလေ့ထုံးတမ်းအရ တစ်နှစ်တွင် ရွာခင်းပွဲ နှစ်ကြိမ်ကျင်းပ လေ့ရှိသည် တောင်ယာမီးရှုးပြီးသည့် အချိန်၌ မည်သည့် မျိုးစေး ယာခင်းတွင်မဝင်ခင် တစ်ခါ ၊ မျိုးပင်များ ဖူးပွင့်ခါစ တစ်ခါ နှစ်ကြိမ်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ကျေးရွာ အဖျားနှာများ၍ သော်လည်းကောင်း ၊ လူနှစ်ဦးအထက် ဆက်သက်၍ သေဆုံးသော်လည်းကောင်း ရွာခင်းပွဲ လုပ်ရသည်။ ထိုအခင်း ပွဲသည် ပုံမှန် ခင်းရိုးမဟုတ်ဘဲ ကုလားမမျောက် သို့မဟုတ် ကဒိုးကဒါ နှစ်ကောင်ကို တောထဲမှာ မရရအောင်ဖမ်းရသည် ။မရရအောင်ဖမ်းရသည်။ ရပြီဆိုပါက ထိုအကောင်ကို အရည်ခွံခွာ၍၎င်းအရီခွံအား ဖြင့်လေးလက်နက်ကိုင်သည့် လူပုံကိုဆင်၍ ရွာ၏ အဝင်ဝ တွင်တစ်ခု ထွက်ပေါက်တွင် တစ်ခု အဝတ်ဆိုးဖြင့် လေးလက်နက်ကိုင်သည့် အရုပ်ပုံကို ချိတ်ဆွဲ ကာထားရသည်။ထို့အပြင် အဝင်ဝ နှင့် ထွက်ပေါက်တွင် ဝါးခြမ်းစိတ်ချွန် နှင့် ကြိမ်ဆူး ဖြင့် စည်းရိုးကိုထိုးပြီး ကာရသည်။ ညနေ မှောင်စတွင် ကျောက်စ ရိုက်များ နှင့် ဆန်ကို ရောပြီးနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်သည့် ကာထာ ခုနှစ်ခါ ရွက်ဆိုကာ ဆုံခေါက်ပြီး ၎င်း ကာထာဖြင့်ရွက်ဆိုထားးသည့်ကျောက်စရိုက် နှင့်ဆန်ကို အိမ်အောက် ရွာပြင်နေရာအနှံ့ကျဲ့မောင်းရသည် နတ်ဆိုးရှိ မရှိ ကို ထွက်ပေါက်တိုင်း ချည်မျှင်ပင်၇ ပင်ပတ်ထိုးထားသည်ကိုကြည့်ရသည်။အကယ်၍ နတ်ဆိုးထွက်ပါက ထိုချည်မျှင်ကြိုးဖြတ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီကထွက်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။ ထိုအတွင်း အပြင်ဧည့်သည် ကိုလုံးဝ ဝင်ခွင့်မပြု သလိုရွာသားများလည်းရွာအပြင်ထွက်ခွင့်မပြု ။ (၇) ရက် တစ်ပတ်ပြုလုပ်ရသည် သို့သော် ရွားများကမူ တစ်ရက်မှ နှစ်ရက်ထိသာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ပြုလုပ်ပြီး သုံးရက်မြောက်တွင် အပြင်ထွက်နိုင်သည် အပြင်ဧည့်သည် ကိုမှု (၇) ရက် အဝင်မပြုပါ ။ထိုအခင်း ကို( ခင်မ်ဆုံ ) နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်သည်ဟုခေါ်ပါသည်။<ref>THE,HILL TRACTS OF CHLTTAGONGAND THE
DWELLERS THEREIN;BY GAPT, T. H , LEWIN, 1869. P-94</ref>
မြိုထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ရွာတစ်ရွာတွင် လူတစ်ဦးသေဆုံးလျှင် တစ်ရွာလုံးအလုပ် မသွားကြ ဘဲ အသုဘအ ခမ်းအနား တွင်ပါဝင်ရသည်။ အသုဘသည် တစ်ရက်မှ သုံးရက် ထားရသည် အကယ်၍ ရွာသူကြီး ၊ တစ်ရွာ၌ အကြီးအကဲ သေဆုံးနေလျှင် ရပ်ဝေးက ဆွေမျိုးများ အသုဘသို့လာ တွေ့နိုင်ရန် သုံးရက် ထားရသည်။ သာမန်လူဆိုလျှင် တစ်ရက် သာထားရသည်။ ထို အသုဘ ညများတွင်း ညတိုင်း လူပျို၊ အပျို၊ မင်းကျွန် များက ရိုးရာ စောင် နှင့် တုရိယာ ပလုံ တို့ဖြင့် သီချင်းကျူးဧကြရင်း စောင့်လေ့ရှိသည်။ မြို ထုံးတမ်းအရ လူတစ်ဦးက အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ရွာ၏အပြင်၌ သေဆုံးနေလျှင် ကျေးရွာ ထဲတွင် လုံးဝ ဝင်သွင်းလေ့မရှိ ၊ ထိုအပြင် ကြိုးဆွဲချသေဆုံး သူများကို သချၤိုင့်တွင် မြေမြှုပ်ထားလေ့မရှိ ။<ref>British Burma Gazetteer .Vol.ll in 1879 ,P,425, 68.</ref> <ref>Captain .G. Rigby, History of Operations in Notherns in Arakan and Yawdwin Chin Hills , Rangoon, 1897,P.80</ref>၇ ရက်မပြည့်သေးသည့် နို့စို့ကလေး သေဆုံးလျှင်လည်း သချၤိုင့် တွင် မြှုပ်လေ့မရှိ။
အကယ်၍ သေဆုံးသူကို မီးသင်္ဂြိုဟ်မည်ဆိုလျှင် ကျေးရွာတွင် အိမ်တိုင်း ထင်းတစ်ချောင်း ကျ ပါဝင်ထည့်ပေးလေ့ရှိသည် ။ပါဝင်ထည့်ပေးလေ့ရှိသည်။ လူတစ်ဦးသေ ဆုံးတိုင်း ခွေးတစ်ကောင်သတ်ပေးလေ့ရှိသည် ။ခွေးတစ်ကောင်သတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ ခွေးသည် ဝိညာဉ် သွားလိုသည့်နေရာ ကို လမ်းပြပေး ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ <ref>G,Hughes <nowiki>'' Hill Tracts of Arakan ,''</nowiki> Rangoon ,1881, P, 23</ref>ယင်းအသုဘ အခမ်းအနားတွင် ပါသော သူများအတွက် အိမ်ရှင်မှ ဝက်တစ်ကောင် သတ်ရသည်။ထိုကြောင့်ပင် မြို တိုင်းရင်းသား တို့၏ အိမ်တိုင်း ကြက်၊ ဝက်၊ ခွေး ကမရှိမဖြစ် မွေးမြူရသည်။ ထို့ပြင် အသုဘ အခမ်းအနားကို သွားကြသည့် သူများအိမ် ပြန်လာလျှင် အိမ်ပေါ် မတက်ခင် မီးဖိုက ပြာကို လှေကားရင်း မှာထားရသည့်အပြင် ခြေ ၊လက်မှာ ပြာမုန့် ဖြင့် ဆေးကြောလေ့ရှိသည်။ ဘာကြောင့် မီးဖိုပြာမုန့် ဖြင့် အသုဘပြန်လာသည့်အခါ တွင် ဆေးကြောရသလဲ ဆိုလျှင် ရိုးရာ ပုံပြင်အရ ရှေးရှေး က မြို လူမျိုးသည် သေဆုံးသူများကို သေဆုံးသည် ဟု မဆိုပေ ၊ လူတစ်ဦးသည် ခန္ဒာကိုယ်လဲ သည်ဟု သာခေါ်ပြီး ၇ ရက် တစ်ပတ်ဆိုလျှင် ပြန်လာသည် ဟု ဆိုကြသည်။ ယင်းပုံပြင်တွင် ဤသို့ ဆိုပါသည် တစ်နေ့တွင် ဆွေးမ ၏ယောက္ခထီး က မသေဆုံးခင် ဆွေးမ ကို မှာထားသည်(၇)ရက်တစ်ပတ်ပြည့်လျှင်ပြန်လာမည်အရုပ်ဆိုးမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ရေနွေးအိုးတည်ထားပါဟုမှာထားအပြီးသေဆုံးသွားသည် ။ရက်တစ်ပတ်ပြည့်လျှင်ပြန်လာမည်အရုပ်ဆိုးမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ရေနွေးအိုးတည်ထားပါဟုမှာထားအပြီးသေဆုံးသွားသည်။ ဆွေးမသည် ယောက္ခထီးမှာထားသည် အတိုင်း (၇) ရက်ကို စောင့်နေ၍ (၇) ရက်ပြည့်ညနေပိုင်း မီးဖို မှ ထွက်လာပြီး ငါ့ဆွေး မ ငါပြန်လာပြီရေချိုးပေးပါဦး လို့ ပြောလာသည်ကို ကြားသည် နှင့် လှမ်းကြည့် ရာ .ဆွေးမသည် .တစ်ခါတည်းထိပ်လန့်ပြီး ယောက္ခထီးမဟုတ်ဘူး သရဲ ဟု ဆိုကာ မီးဖိုက ပြာဖြင့် ပစ်ပေါက်လိုက်သည် ။ပစ်ပေါက်လိုက်သည်။ ထိုအခါအဖိုးအိုသည် ဤသို့ မှာကြားသည် လူသားသည် သေဆုံးပြီးလျှင် ပြန်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြော ပြီး ပြန်သွားလေ၏ ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုအျိန်မှစ၍ ယနေ့တိုင်လူသားသည် သေဆုံးပြီးလျှင် ပြန်မလာတော့သည် ဟု ယူဆကြလေသည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/622650" မှ ရယူရန်